प्रचण्ड र मधेसी मोर्चा सम्वन्ध विच्छेदतर्फ | Radio Langtang 90.3 Mhz
१७ माघ, काठमाडौं । सरकारले चुनाव घोषणाको तयारी थालेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाको दुरी बढेको छ । र, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सम्वन्ध विच्छद गरेर अब आ-आफ्नो बाटो लाग्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बोलाएको कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठक सकारात्मक हुन सकेन । बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन अघि बढाउने तर, चुनावलाई रोक्न नसकिने बताए ।
प्रधानमन्त्रीका चार प्रश्न
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई चार प्रश्न राखे ।
उनले सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेपनि चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई भन्ने भन्दै मान्ने कि नमान्ने भनेर प्रश्न गरे । यसबीचमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने र यो टुंगोमा पुगेपछि मिति घोषणा गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
उनको अर्को प्रश्न थियो, संविधान संशोधनलाई संसदको प्रक्रियामा लैजाँदा फेल पास जे पनि हुनसन्छ । यसो हुँदा चुनावमा जाने कि नजाने ?
तेस्रो प्रश्नः संशोधनमा के के परिर्माजन गर्न सकिन्छ मैले पहिला नै प्रष्ट भनिसकेको छ । यति परिर्माजन पनि संशोधनलाई मान्ने कि नमान्ने ?
चौथो प्रश्नः स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा केही हेरफेर गरौं । यो फेरबदलपछि स्थानीय तहकै चुनावमा जाने कि नजाने ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना चार प्रश्नबारे जवाफ लिएर अर्को बैठकमा आउन मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेको रामसपाका महासचिव केशव झाले बताए । त्यो बैठक भोलि पर्सि नै राख्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरु आक्रोसित
मधेसी मोर्चाको दुई सन्देश
मधेसी मोर्चालाई देउवाको प्रश्न
मधेसी मोर्चाका नेताहरुको अडान सुनेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तपाईहरुको अडान स्थानीय चुनाव हुनै नदिने पो रहेछ होइन त भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
इलाम, १६ मंसिर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वाम गठबन्धनका तर्फबाट इलाम क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार झलनाथ खनाल सवार नजिकै ...
काठमाडौं । हल सञ्चालक र चलचित्र वितरकहरुको संस्था नेपाल चलचित्र संघको अध्यक्षमा प्रदिपकुमार उदय सर्वसम्मत चयन भएका छन् । हेटौडामा ...
बर्षकै बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘कृ’को फस्टलुक सार्वजनिक भएको छ । नायक अनमोल केसीलाई मात्र समावेश गरेर चलचित्रको फस्टलुक तयार पारिएको छ । फस्टलुक सार्वजनिक गरेसँगै चलचित्रको ...